Import Video / Photo / Audio Faylal ay si iMovie
Dejinta noocyada kala duwan ee warbaahinta ay u iMovie
iMovie aad u baahan tahay in ay ku shuban warbaahinta mashruuca si aad u sii edit karaa. The files aad dajiyaan laga yaabaa in la codec iyo qaabab kala duwan soo. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka ma aqoonsana dhammaan faylasha, laakiin ku xaddidnayn ah qaabab socon yar. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin iMovie in ay hoosta ka xariiq sida ay u dajiyaan noocyada kala duwan ee warbaahinta.
Qeybta 1: Import video files si iMovie Qeybta 2: Import sawir / files audio in iMovie Qeybta 3: Import YouTube videos in iMovie
Qeybta 1: Import video files si iMovie
Si aad filimada ee iMovie, in aad marka hore waa ka il kala duwan si ay iMovie wareejiyo filimada ee. Sida iMovie ugu horayn waxa loogu talagalay in lagu soo dhoofsadaan videos ka aaladaha kala duwan, waxaad si fudud u dajiyaan karaa videos ka:
Fiidiyo Tape ku salaysan
Fiidiyo Memory ku salaysan
1. Videos Import ka fiidiyo cajalad ku salaysan
Tallaabada 1. Connect fiidiyo ugu Mac
Daar fiidiyo ah oo qarka u saaran inuu VTR ama hab VCR. Fur iMovie iyo xirmaan fiidiyo ah in Mac la cable. Kolkaasaa waxaa kor u soo booda suuqa kala Import (haddii suuqa kala Import uusan furan, dooran File> Import ka Camera).
Tallaabada 2. Deji / Automatic ah biiro Buugga
Dhammaan video ku saabsan cajaladda laga keeno Automatic, oo mar kale rewinds cajaladda. Haddii aad isticmaasho Doorashadan, riix OK. Buugga gelineya inaad dajiyaan oo kaliya footage aad rabto. Waxaad isticmaali kartaa gacanta ku ah in aad cajalad in ay dhibic halka aad rabto in aad bilaabi Keenista. Markaas riix Import si uu u badbaadiyo video meesha aad doorato.
Tallaabada 3. darsada video ah in la odoroso
Ka dib markii in, la abuuro dhacdo cusub ama dhacdo jira haddii aad mid leedahay.
2. Videos Import ka fiidiyo xusuusta ku salaysan
Daar camera aad oo qarka u saaran inuu hab PC Connect. Fur iMovie iyo xirmaan camera ah si aad u computer la cable. Markaas suuqa kala Import arbushin doonaa (haddii suuqa kala Import uusan furan, dooran File> "Import ka Camera").
Tallaabada 2. Import video aad rabto
Si aad u dajiyaan oo dhan clips, dhigay Automatic / biiro Buugga si Automatic, ka dibna riix Import All. Dhinaca kale, dhigay wareegto si gaar ah clips Buugga iyo soo dejinta, ka dibna riix Import Hubisay. Ka dib markii in, badbaadin video ah meesha aad jeceshahay.
3.Videos Import ka filimada jira
Ma aha oo dhan video aad rabto waxaa ku kaydsan fiidiyo ah. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid clips nuqul ku saabsan Mac. Ka hor inta aadan soo dhoofsadaan kuwaas video files si iMovie, waa in aad hubiso in ay taageerayaan ku iMovie hore:
Taageerayaan Import qaabab
DV, MPEG-4, MPEG-2, QuickTime iyo AVCHD
Fiiro gaar ah: Inkasta oo iMovie taageertaa qaabab kuwaas oo, ma aha in kiiska had iyo jeer marka aad isku daydo inaad iyaga soo dhoofsadaan in iMovie. Si loo xaliyo dhibaatada, kaliya badalo faylka si iMovie qaabab socon la isticmaalayo habka hoos ku xusan.
Qaabab ma taageersana
AVI, MKV, wmv, FLV, Jabbuuti, VOB, MTS, M2TS, TS, TP, mod, 3GP, ASF, ECT
Haddii qaab faylka waa la jaan qaada iMovie, waxaad samayn kartaa click fudud File> Import> Movies ... si ay u isticmaalaan. Sida qaabab ma taageersana, waxaad u leedahay in iyaga loogu badalo in ay iMovie qaabab socon hor galinta. Halkan dhan-in-mid iMovie Converter ah: Video Converter Ultimate for Mac si weyn lagu talinayaa. Waxa si fudud badasha ka badan 400 oo ah qaabab ay u iMovie tayo waayi maayo. Raac tallaabooyinka hoose si loogu badalo videos in iMovie.
Tallaabada 1. shuban aad files warbaahinta
Iyada oo ay Browser Media bixiyo, waxaad si fudud u heli karaan files warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa iyaga si toos ah Jiida Jaximo suuqa kala barnaamijka diinta. Just riix badhanka Import ah, suuqa kala Browser Media arbushin doonaa.
Tallaabada 2. Dooro iMovie sida qaab wax soo saarka
Riix hoose qaab icon ugu waxyooda guddiga wax soo saarka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo video iyo qaab maqal ah oo loogu soo saarka. Waxaad dooran kartaa MOV, MP4, M4V, iMovie sida qaab saaxiibtinimo sida wax soo saarka. Wax wanaagsan, oo aad si toos ah u dooran kartaa presets qaybiyay u iMovie, ama codecs hooyo sida ProRes, Apple Dhexe codec si loo hubiyo natiijada ugu fiican ee marka la iMovie sixiddiisa.
Tallaabada 3. Ku bilow hawlaha qaab beddelidda
Ka dib markii ay doortaan qaab wax soo saarka aad la doonayo, haatan kaliya ka dhacay Beddelaan inuu ku soo bilowdo diinta videos in iMovie u Mac. Markii diinta lagu sameeyo, dooran File> Import> Movies inay dajiyaan faylasha video in iMovie.
Qeybta 2: Import sawir & audio files si iMovie
iMovie sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto sawir iyo files audio in filimada si aad u filimada ayaa in ka badan farshaxanka. Waa adag tahay oo dhan. Just raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Ku dar sawir files ka iPhoto ama PhotoBooth
Ku dar files audio ka Lugood ama GarageBand
Tallaabada 1. Fur maktabadda sawir aad
Dooro Windows> Photos ama ku dhufatey "Sawirro" button, oo u eg camera ah ee toolbar ah.
Tallaabada 2. Dooro iyo dar sawiro aad rabto
Riix dropdown in ay maraan si ay sanamyadiinna doorataa codsiga (iPhoto ama PhotoBooth) ay ku jirto faylasha aad. Liiska images muuqan doonaan suuqa kala maktabadda image ka. Haddii aad og tahay magaca sawirka, aad ka raadin kartaa duurka raadinta.
Si aad u dajiyaan sawiro si aad Project Timeline, guji iyo jiidi sawirka xulay galay waqtiga.
Tallaabada 3. Dheellitir sawir files
Haddii aad jeclaan lahayd inaad bedesho goobaha default ee clip sawirka, riix marsho ee geeska hoose ee bidixda ah clip sawirka.
Hit "clip hagaajinta" iyo menu Isbatooraha ah u muuqataa, halkaas oo aad sameyn kartaa muddada waqtiga sawir ay soo bandhigeen ama dooran saamayn video ah. Waxa kale oo aad ku dhacay karaa "abuurka, Ken Burns & wareegga" in astaysto sawiradaada. Ka dib markii dhammaan goobaha, guji "qabtay" dhammayn beddelaan.
Tallaabada 1. Open music iyo saamaynta dhawaaqa browser
Dooro Window> Music iyo Sound Raadka ama guji badhanka "Music iyo Sound Raadka" in toolbar iMovie in uu bixiyo Music iyo Sound Saamaynta browser.
Tallaabada 2. Dooro iyo dar music aad rabto
Riix dropdown in ay maraan si aad files audio doorataa codsiga (Lugood, GarageBand) ama folder ay ku jirto faylasha aad. Waxaad isticmaali kartaa beerta Search si aad u ogaato file maqal ah aad rabto in aad magac.
Si aad ku dari files audio in aad Project Timeline, guji iyo jiidi file maqal ah galay waqtiga.
Tallaabada 3. Dheellitir file maqal ah
Dooro clip ka audio, guji marsho iyo dooran "clip Trimmer", "clip hagaajinta" iyo "hagaajinta Audio" si ay u astaysto asalkaaga music iMovie. Waxaad jar karaa music ah, qabsato mugga iyo dhigay baxeysa maqalka, libdhi isbaddelada, iwm
Qeybta 3: Import YouTube videos in iMovie
Waxaa laga yaabaa inaad ka heli xiiso leh dad badan videos on YouTube ay doonayaan inay iyaga ka sii iminka la iMovie. Halkan ah online video downloader fududahay in la isticmaalo iyo Converter - Allmytube u Mac la soo bandhigo inuu kaa caawiyo inaad dajiyaan YouTube videos in iMovie. Way fududahay in la isticmaalo iyo aad u saamaxaaya in ay downloads YouTube playlists, channels, iyo mobilada ee yaalla.
Tallaabada 1. Download YouTube videos si fudud
Ku rakib downloader YouTube ah. Raadi aad jeceshahay YouTube videos oo iyaga oo ciyaaraya, waxaa jira laba hab oo ay u soo bixi videos ah:
Habka 1: Koobiyee url ee video YouTube ah oo taga si uu furmo suuqa Saarashada inay riix badhanka URL koollada.
Habka 2: Riix badhanka Download ku saabsan dhinaca kore ee midig ee video ah.
Tallaabada 2. loogu badalo in ay ka iMovie qaab saaxiibtinimo
Hubi files video maktabadda soo bixi oo guji badhanka Beddelaan on xaq. Dooro MOV ama MP4 sida qaab wax soo saarka uu furmo suuqa dabamariyay kor. Riix OK. Your video YouTube doonaa ka dibna la isku beddelaysaa qaab iMovie-saaxiibtinimo ee waqti gaaban. Markaas ka heli meesha faylasha la gediyay YouTube ku kaydsan yihiin oo u furan iMovie, dooro File> Import> Movies in ay dajiyaan faylasha.
> Resource > iMovie > iMovie: Import Video / Photo / Audio Faylal ay si iMovie